गाउँमा खुसी, सदरमुकाममा अन्योल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चिकित्सक भन्छन्–'९० प्रतिशतले दाँत माझ्न जान्दैनन् '
चैत्र ८, २०७३ अतुल मिश्र
काठमाडौं — दन्त चिकित्सकहरूले करिब ९० प्रतिशत नेपालीले उपयुक्त ढंगले दाँत माझ्न नजान्ने बताएका छन् । हालसम्म मुलुकमा यसबारे खासै अध्ययन नगरिए पनि उपचारका लागि आएकाहरूको अवस्था हेरेर दन्त चिकित्सकहरू यो आकलनमा पुगेका हुन् ।
‘हाम्रो आकलनअनुसार करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई उपयुक्त तरिकाले दाँत माझ्न आउँदैन,’ नेपाल दन्त चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्तोषमान राजभण्डारी भन्छन् ।
उनका अनुसार धेरैजसो नेपालीले दाँत सफा गर्नुलाई महत्त्वपूर्ण माने पनि सही तरिका थाहा नभएर अधिकतम फाइदा लिन सकेका छैनन् । मुलुकमा बालबालिकामा करिब ९० प्रतिशत र वयस्कमा करिब ६० प्रतिशतसम्म दाँत किराले खाने समस्याको एउटा प्रमुख कारण सही तरिकाले दाँत नमाझ्नु हो ।
यति मात्र नभई दाँतसम्बन्धी समस्याले नेपालीको औसत आयुमा समेत असर पारिरहेको छ । ओरल म्याक्जिलोफेसियल सर्जन डा. सुवास घिमिरेसमेत दाँतलाई सफा गर्ने विधिमा खासै ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘हामीले दाँत सफा गर्नुलाई एउटा प्रक्रिया ठानेर दिनहुँ झारा टार्ने गर्छौं,’ डा. घिमिरे भने, ‘सर्वसाधारण, पढेलेखेका, विशेषज्ञ मात्र नभई चिकित्सकहरूलाई समेत उपयुक्त तरिकाले दाँत माझ्न आउँदैन ।’
बहुसंख्यक नेपालीले दन्त चिकित्सक नजिक पुग्दा दाँत माझ्ने विधिबारे सोध्ने गरेका छैनन् । उनीहरूले कुन टुथपेस्ट, कस्तो ब्रस प्रयोग गर्ने आदिबारे मात्र सोध्छन् । दाँतलाई राम्ररी माझा कुल्ला, डेन्टल फ्लस आदि गर्दा करिब ६० प्रतिशत दाँतसम्बन्धी रोग हुनबाट जोगिन सक्ने डा. घिमिरे बताउँछन् ।
बिहान खाना खाएपछि र राति खाएर सुत्ने बेला गरी कम्तीमा दुई पटक दाँत माझ्नुपर्छ । एउटै ब्रस धेरै समयसम्म उपयोग गर्नु हुँदैन । दाँत माझदा फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने दन्त चिकित्सकहरूको धारणा छ । दिनहुँ गर्ने एउटा प्रक्रिया जस्तै ब्रस वा दतिउन लियो, मिनेट न पुग्दै यताउता गर्‍यो र दाँत माझियो भनेर ठान्नेहरू नै बहुसंख्यक रहेको औंल्याउँदै डा. राजभण्डारी न्यूनतम दुईदेखि तीन मिनेटसम्म ब्रस गर्नुपर्ने बताउँछन् । ब्रस गरेपछि जिब्रो सफा गर्न भने बिर्सनु हुँदैन । यसले मुखमा भएका किटाणुहरूको संख्यालाई कम गर्छ । डा. राजभण्डारी सामान्यतया धेरै कडा वा बढी नरम ब्रस उपयोग नगर्ने सल्लाह दिन्छन् । कडा ब्रसले दाँत खिइने र नरम ब्रसले दाँत राम्ररी सफा नहुने हुँदा सामान्य व्यक्तिले न नरम, न कडा अर्थात् मध्यम लचकता भएको ब्रस उपयोग गर्नुपर्छ । मुखमा अनुकूल हुने ब्रस प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्रस गर्दा दाँत र गिजालाई नघोचिने गरी माझ्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले ब्रसलाई माथिल्लो दाँतअन्तर्गत गिजाको माथिल्लो भाग राखेर तल दाँततिर आउन दिने । यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउने । यसले गिजामा रक्तसञ्चार हुनुका साथै दाँतलाई समेत बलियो बनाउँछ । यसपछि तल्लो दाँतअन्तर्गत तलको गिजाबाट ब्रसलाई माथि दाँतसम्म लिएर जाने । ब्रस तलमाथि गर्नु हुँदैन । दाँतको भित्री भागमा समेत यसैगरी सफा गर्नुपर्ने जनाउँदै डा.घिमिरे टोक्ने भागमा पनि ब्रसले अगाडि/पछाडि गरेर सफा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।
मुख स्वास्थ्यबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले राजधानीमा सोमबार ‘विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस २०१७’ मनाइएको छ । ‘जसको दाँत सबल, उसको जीवन सफल’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको आयोजक नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले जनाएको छ ।
विभिन्न जटिल रोग लाग्नुका कारणमध्ये मुख स्वास्थ्य पनि एक हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुवास घिमिरेले बताए । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले कोही पनि नेपाली दाँतको उपचार गर्न विदेश जानु नपर्नु देशका लागि गौरवको विषय भएको बताए ।